र’क्सि खाएर श्रीमानलाइ कुट्ने श्रीमतीले अन्तत् खुट्टा ढोगेर मागिन रुँदै माफी (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २८, २०७८ समय: १९:४१:५१
झापा । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा केहि कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । जसले सम्बन्ध बलियो मात्र हुँदैन् । एकअर्काबीच सम्मान र प्रेम पनि बढ्छ ।
भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ ।नेपालमा आजकल श्रीमान श्रीमती बीच धेरै बिबाद भएका समाचार आउने गर्छन ।झापाको झिलझिलेमा पनि एक दम्पतिमा बिबाद आएको छ । श्रीमतीले धेरै रक्सि खाएका कारण श्रीमानले सौता ल्याएका छन् । उनीहरुको अहिले पुनरमिलन भएको छ ?
Last Updated on: May 11th, 2021 at 7:57 pm